(1)Prepare for CCNA Exam -CCNA ဖြေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် -(2) Cisco Packet Tracer V.5.3 | (3) CCNA Lab Training Video ~ ITmanHOME
11:31 CCNA, နည်းပညာ3comments
(1)Prepare for CCNA Exam -CCNA ဖြေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် -(2) Cisco Packet Tracer V.5.3 | (3) CCNA Lab Training Video
CCNA ဖြေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဒီ Post ကိုဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
CCNA ဖြေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Software တွေကတော့
2. Visual CertExam Suite တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ Software တွေရပြီဆိုရင်တော့ လေ့လာစရာ Study Guide Book, Website နဲ့ Questions & Answers အတွက် vce File ပဲလိုပါတော့တယ်။
Study Guide Book ကိုတော့ ဒီနေရာကနေ ရယူလိုက်ပါ။
Simulation နဲ့ Simulation Questions & Answers အတွက်လေ့လာသင့်တဲ့ Website ကတော့ ဒီမှာပါ။
Questions & Answers အတွက်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကနေ ရယူလိုက်ပါ။
CCNA နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းတက်ရောက် ပြီးသားသူတွေဆိုရင်တော့ အထက်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ Software တွေနဲ့ Exam Material တွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ စာမေးပွဲဖြေဖို့အတွက် စာစကြည့်လို့ရပါပြီ။ တစ်ကယ်လို့ သင်တန်းတက်ရောက် ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့။ Video Training တွေလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်၊ Video Training ထဲမှာတော့ CBT Nuggets ရဲ့ Training ကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ Network နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံမရှိ သေးတဲ့သူတွေတောင် CBT Nuggets ကို ၂ခေါက်၊ ၃ခေါက်လောက် သေသေချာချာကြည့်လိုက်တာနဲ့ နားလည်လာနိုင်ပါတယ်။ Trainer ပြောတဲ့ English ကလဲ အရမ်းခက်ခဲတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ မပါသလို၊ စကားပြောတာကလဲ အရမ်းမမြန်ပါဘူး။
Training Video ကို Online ကနေ Share ပေးချင်ပေမဲ့ Connection အခြေအနေကြောင့် ဘယ်လိုမှ Share လို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။ Training Video ကိုလိုချင်တဲ့ ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကျွန်တော့ဆီကို လာယူလို့ရပါတယ်။
CCNA စာမေးပွဲကိုဖြေဖို့ အတွက် CCNA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာတွေကိုလေ့လာပြီးပြီဆိုရင်တော့ Exam Collection ထဲကိုသွားပြီးတော့ မေးခွန်းကို Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။ အဲ့လို Download လုပ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် တော့ဘယ်မေးခွန်းကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို Comment ပေးထားတယ်ဆိုတာကို အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လို လေ့လာကြီးပြီး အများစုက recommend ပေးထားမဲ့ အဲ့ဒီမေးခွန်းကို လေ့လာပါ။
မေးခွန်းတွေကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ A,B,C,D စတဲ့ Answer Senior တွေကို အလွှတ်မကြည့်ပါနဲ့။ မေးခွန်းကို ကျက်မယ်ဆိုရင်တောင် အဖြေအပြည့်အစုံကိုပဲ ကျက်မှတ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စာမေးပွဲဖြေတဲ့အခါမှာ အဖြေတွေက ကိုယ်ကြည့်ထားတဲ့ မေးခွန်းထဲကအတိုင်း Senior အလိုက်အလာပါဘူး။ မေးခွန်းတွေကို လေ့လာလို့ (သို့) ကျက်မှတ်လို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ www.9tut.com ကိုသွားပြီးတော့ Simulation တွေကို Download လုပ်ယူပြီး လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေကိုပဲ ကြည့်သွားပြီး Simulation ကိုလုံးဝမဖြေဘူးလို့တော့ အစဉ်းစားကျပါနဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Simulation ကအနဲဆုံး (၄)ပုဒ်ပါပါတယ်။ တစ်ပုဒ် ကိုအမှတ် ၁၀၀ ၀န်းကျင်လောက် ပေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် Simulation တစ်ပုဒ် မဖြေနိုင်လိုက်တာ အမှတ် ၁၅၀ လောက်လျော့သွားလို့ပါ။
Simulation မှာ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
ပထမအမျိုးအစားက Configuration Simulation ပါ။ မေးခွန်းမှာပေးထားတဲ့ အတိုင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် Configure လုပ်ရတာမျိုးပါ။ (ဥပမာအားဖြင့် - Access List Simulation 2)
ဒုတိယအမျိုးအစားက Simulation Question & Answer ပါ။ သူတို့မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့အတွက် Show command ကိုအသုံးပြုပြီး လိုက်ရှာရတာမျိုးပါ။(ဥပမာအားဖြင့် - VTP Simulation)
နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ သတိထားရမှာက CCNA စာမေးပွဲ ဖြေချိန်က ၁၄၀ မိနစ်ပါ၊ ဖြေဆိုရမဲ့ မေးခွန်းက ၅၀ပုဒ်ကျော်ပါ၊ အောင်မှတ်ကတော့ ၈၂၅မှတ်ကျော်မှ အောင်မှာပါ။ မေးခွန်းတွေကို ဖြေတဲ့အခါမှာလဲ ဖြေပြီးလို့ Next ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် ပြန်ပြင်လို့မရသလို ပြန်ကြည့်ခွင့်လဲ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ စာမေးပွဲဖြေနေတဲ့အချိန်မှာ စိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ အဖြေကိုသေချာစဉ်းစားပြီးရွေးပါ။ ရွေးပြီးလို့ Next ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးသလိုပါပဲ။
CCNA ဖြေဆိုသူအားလုံး အောင်မြင်ကျပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Cisco Packet Tracer V.5.3
CCNA ဖြေဖို့ Cisco Device တွေကို လက်တွေ့စမ်းသုံးဖို့ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် CCNA ဖြေဖို့အတွက် Lab တွေလုပ်ရာမှာ အသုံးပြုဖို့ Cisco ကထုတ်ပေးထားတဲ့ Packet Tracer V.5.3 ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်...............
CCNA ဖြေဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် CCNA Lab Training Video ကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်.....
7 January 2013 at 08:23 Reply
Wrong Credit. Should be Manadalar.Net
7 January 2013 at 09:02 Reply
Taryar Pwakyi says:
20 January 2013 at 21:23 Reply
you can try to learn in www.yourtut.com for cisco video tutorials.